I-Vlamertinge iyisizinda esifundazweni saseBelgium saseWest Flanders nasesidolobheni saseYpres. Isikhungo sendawo yedolobha laseVlamertinge singaphandle kwendawo yedolobha laseYpres, eduze komgwaqo omkhulu uN38 edolobheni eliseduze lasePaperinge.
Ngaphandle kwendawo yedolobha laseYpres uqobo, i-Vlamertinge iyona dolobha enkulu kakhulu ye-Ypres. Ngasentshonalanga yeVlamertinge, emgwaqweni oya ePaperinge, yindawo yaseBrandhoek.
3 Ukuthuthukiswa kwezibalo
Idatha yokuqala mayelana ne-Vlamertinge idlule kusukela eNkathini Ephakathi. Ngo-857 ithempeli lakhiwa kuVlamertinge. Ngo-970 Ypres kwabhujiswa futhi isonto likaVlamertinge lishisa. Idokhumenti endala, eyaziwayo kuze kube yimanje, efaka igama elithi Flambertenges, isenzo sonyaka ka-1066. UBaudouin van Lille, ubale Flanders, umkakhe u-Adela nendodana yabo uBaudouin, kulokhu kuhlinzeka izimpahla esontweni nasesahlukweni kusukela eSint-Pieters eLille. Lezi zimpahla kwakuphakathi kwezinye izinto, okweshumi esise-Elverdinge futhi okweshumi kuVlamertinge - "In territorio Furnensi, in villa Elverzenges, decinam unam ; Flambertenges decinam similiter unam ".
Ngaphansi kwe-Ancien Régime Vlamertinge kwakuyinkazimulo yeVeurne-Ambacht eneminyaka engama-22 ngemuva futhi yahlupheka kakhulu emasimini aseYpres aseduzane.
I-Vlamertinge ingamamitha angu-17 ngaphezu kwezinga lolwandle. Umasipala futhi unqamule i-Ypres eMpumalanga, i-Voormezele eningizimu-ntshonalanga, iKemmel neDikkebus eningizimu, eReningelst eningizimu-mpumalanga, iPereringe entshonalanga, i-Elverdinge enyakatho neBrielen enyakatho-mpumalanga.
Ukuthuthukiswa kwezibalo[hlela | Hlela umthombo]
Kusukela ngo-1487 kuya ku-1697 sibona ukwehla okukhulu kwabantu baseVlamertinge. Incazelo ecacile kakhulu yalokhu bekuyoba yiMpi Yezinsuku Eyinkulungwane E-Netherlands. Ngesikhathi seMpi Yezwe Yokuqala sibona ukuthi abantu baphindela kabusha. Lokhu kungenxa yokuthi i-Ypres eseduzane, eyayiyi-edolobheni yangaphambili, ibhejane kakhulu futhi uVlamertinge naye wahlupheka kakhulu kulezi zindawo zokuhlaselwa kwamabhomu.
Ukuzijabulisa[hlela | Hlela umthombo]
Isonto le-Saint Vedastus
Ihholo lasekuqaleni lase-Vlamertinge kusukela ngo-1922, ngesitayela se-neo-Flemish Renaissance
I-Castle of Vlamertinge noma i-Castle du Parc yakhiwa ngo-1857-1858 ngokuya kwe-Viscount Pierre-Gustave du Parc, ngemuva kokuklanywa nguJoseph Schadde.
EVlamertinge kunamanani amathuna empi aseBrithani kusukela eMpini Yezwe Lokuqala:
"https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vlamertinge&oldid=44926" تان ورتل
Leli khasi laqeda ukuhlelwa ngo-30 uMasingana 2018, nge-17:35.